Indlu yeLizwe epholileyo enePool yeSky TV yokuQubha kunye neWiFi
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguWaldir
I-decor ilula, njengoko ifanele indlu yelizwe. Ukufikelela ngokulula, yonke igangathiwe kwaye ikufutshane neSP. Isixeko saseSantana de Parnaíba yimbali kwaye samkelekile, njengekhaya lethu apho iintombi zam zazalelwa khona. Indawo efanelekileyo yamatheko kunye nokuqokelela abahlobo. Wamkelekile!
Bangasebenzisa yonke indawo, ngokuqinisekileyo banakekele igadi kunye nezityalo.
isofa ekwayibhedi eyi-1, 1 iisofa eziyi-, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
4.75 · Izimvo eziyi-81
Uya kuba yi-1km ukusuka kumbindi wesixeko esiyimbali saseSantana de Parnaíba enezitrato zayo ezimnandi ezineendawo zokutyela ezilungileyo kunye nemivalo! Kumnandi ngenene ukuhamba kwezi zitrato zisembindini.
Umbuki zindwendwe ngu- Waldir
Adoramos viajar também pelo AirBnB
Sinesibini sabanonopheli abahlala kwifama kwindlu eyahlukileyo. Banenkathalo, balumkile kwaye balapho ukugcina idama kunye nazo naziphi na iimeko zikaxakeka ezinokuthi zenzeke, ezifana nebhalbhu yesibane esitshisiweyo, ukuphelelwa yigesi, njl.
Amagama abo: nguEloi noLiênia. UEloi yipizzaiollo kunye nebarbecue kwaye unokukulungiselela yona! Iindleko ngqo kunye naye! Banokuqesha ngokuthe ngqo.
Sinesibini sabanonopheli abahlala kwifama kwindlu eyahlukileyo. Banenkathalo, balumkile kwaye balapho ukugcina idama kunye nazo naziphi na iimeko zikaxakeka ezinokuthi zenzeke, ezi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santana de Parnaíba